Daddaaqaama siyaasaa yeroof nu muudateen aarsaa yeroo dheeraaf kaffaallee gatii hin dhabsiisnu – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDaddaaqaama siyaasaa yeroof nu muudateen aarsaa yeroo dheeraaf kaffaallee gatii hin dhabsiisnu
Laabsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamicha Ajaaja olaanaa WBO Irraa dhihaate hordoofun bahee
Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo siyaasaa gaggeessaa turee dhaaba isaa ABO jalaatti hiriiruun hanga har’aatti qabsoo godheen jijjiiraama biyya tana keessaatti mul’aata jiruuf madda bu’uuraa tahee jira. yeroo kanaattis jijjiiraama siyaasaa idiil addunyaa, afriikaa, gaanfa afriikaa, akkasumaas impaayera Itoophiyaa fi Biyya teenya Oromiyaa keessaatti tahaa jiruu obsaan ilaalaa jirraa. akeekni Qeerroon qabsoo taasiseef sarbaama mirga namoomaa qe’ee Abbaa oromoo kabaaja fi ulfiina dhabdeetti kabaaja horee mirga abbaa biyyummaa akka sabaatti qabnu mirkaneeffannee kabaajchiifatuufi. Haa tahuutii taateewwaan irraa deeddebiin tahaa jiraan hundiyyuu kan faallaa wareegaama oromoon akka sabaatti kaffaalaa turee waan tahaaniif kana immoo callisnee ilaaluuf obsa fixaannee jirraa. waanti amma mul’aataa jiruu kun namootaaf ifa tahuu baatuus nuti Qeerroon bilisummaa oromoo qabsa’oota keenya qaalii abboota qabsoo umurii isaanii qabsoorraatti dabaarsan galateeffachaa, kabaajaa qabsoo keenya hanga galmaan geenyuutti qaama akeeka ABO galmaan gahuuf sochoo’u waliin hiriirree itti fuufna.
waadaan murna biyyaa bulchuun uummaata keenyaaf galaame faalla’uun holoolaaf qofa nutti fayyaadamuun Qeerroon akka uleetti ilaalamee guyyaa rakkoo qofa ergatuuf nutti fayyaadamuun isaanii tuffii guddaa nuuf qabaan agaarsiisa. kanaaf immoo nuti akeeka keenya galmaan gahuuf irree keenya ol kaasna. gaaffii waggaa dheeraaf gaafatamee osoo hin deebisiin holoola biraa Obbooleessa hangaafa Qeerroo kan tahee qaama keenya WBO irraatti oloola oofaamu dura dhaabbachuuf of qopheessina.
Qaamni biyyaan bulcha ofiin jedhuu waggoota 28f Saamiicha uummaata oromoo irraatti raawwatee ammaas itti fufuun cinaatti erga waggaa tokkoon asii immoo maqaa jijjiiraama jedhuun uummaata gowwoomsaa ajjeechaa saamichaa fi buqqaafamuu nurraatti gaggeessuun duubaan ammoo saboota biroo qabeenya keenya dhaalchisaa waan jiraaniif kanarraa uummaata keenya baraaruuf tarkaanfii kamiyyuu fudhaachuuf kaanee jirraa.
gaaffii bu’uuraa qabsoo uummaata oromoo karaa maksuun ukkaamsanii inumaayyuu hiraarsa itti fufaa jiruu. hidhaamtoota achii buuteen isaanii dhabaame nutti himuu jennee osoo eegnuu, dabaalataan butaanii ukkaamsuun itti fufee jiraa. kanaaf immoo Qeerroon gochoota uukkaamsa fi zaliilii mootummaan nurraatti raawwataa turee har’aa akka as nutti deebi’uuf hin heeyyaamnu. kana duraas ni dhaabbannaa.
Waraana bilisummaa oromoo WBO waliin karaa nagaan xumurra jedhee waadaa ertiraatti galee haaluun lola labsuun isaa nageenya kan hin feene shoroorkeessaa tahuu isaa nu agaarsiisa. kanaas bosoonaa fi qilleensa oromiyaa summiin faalaa jiraachuun isaanii ilmaan oromoo WBOtti lolaa banuun isaa egeree oromoo gaaffii jala kan galchuu waan taheef shira mootummaan abbaa irree nurraatti raawwataa jiruu ni balaaleeffanna. walumaa galaatti qonnaan bulaan, daldalaan, hojjaataan, hayyoonni, beektoonni, artiistoonni, beektoonni fi qabsa’oonni sirna kanaan waggoottan biyyaa ari’aatamaa hidhaamaa ukkaamfamaa ajjeefamaa fi saamamaa, akkasumaas jiraa gubaataa turree yeroo kanaatti sirna kana ofirraa qimmiiduun adaabbii dhumaa adaabuu qabna.
gaaffiin mirga hiree murteeffannaa oromoo akka kabaajamuuf akkasumaas sirna waggaa 30tti dhiyaatuuf nu hiraarsa jiruu kanaatti xumuura gochuuf Qeerroon waamicha ajaaja olaanaa WBO dhagaahuun waamicha kanaaf fiincila maayii Garbummaa labsee jiraa
Laabsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo.
OMN: Dhiibbaan Siyaasaa Hojii Keenyarraa Nu Hin Dhaabu!! Ibsa OMN irraa Kenname Duula bal'aa karaa…